तीन पात साग, ६ त्यान्द्रा पराल
तरकारी रहेनछ । पसल गएँ । रायोको राम्रो साग रहेछ । उचालें । मुठो हातभरिको जस्तै लाग्यो ।
एक मुठाको २० रुपैयाँ । किनें । अनि फर्किने बेलामा पसलेसँग ३ ढिँडी हरियो खोर्सानी मागें । खोर्सानीको पैसा परेन । धनियाँ मागिनँ ।
कोठामा पुगेर मुठो फुकाएँ । जम्मा ३ वटा पात । सागको मुठो बाँधिएको परालको त्यान्द्रा भने ६ वटा ।
पराल फाल्न फोहोरको भाँडोतिर फर्किएँ । ह्वास्स गन्हायो । फोहोर लिन गाडी नआएको ७ दिन भएछ । फोहोर धेरै भएछ, कुहिएछ । गन्हाउने नै भयो ।
बेलुका अफिसबाट घर पुगें । किचेनको कुनामा प्लाष्टिकमा एउटा पोको देखियो । ‘यो पोको के हो ?’ श्रीमतीसँग सोधें ।
‘फर्सीको धर्सा,’ श्रीमतीले भनिन् । साँझ किनेको रहेछ फर्सीको मुन्टा । खाना खाने बेलामा हेरें । तरकारी थोरै थियो । प्लाष्टिकको पोको ठूलो । फोहोरको भरिएको भाडो फेरि सम्झिएँ ।
अनि बिहानको साग पनि सम्झें । तीनवटा रायोको पात बाँध्न ६ वटा परालको त्यान्द्रा किन ? पराल त बेग्लै पनि बिक्री हुन्छ । रायोको प्रत्येक पात बेग्लाबेग्लै, अनि फेरि एउटै मुठो पारेर किन बाँध्नु परेको ? बाँध्न समय र श्रम पनि खर्च भयो होला । श्रमको पनि त मूल्य हुन्छ ।
२० रुपैयाँमा ३ पात रायो आउने हो भने, त्यो मात्रै बेचे भैहाल्यो । सागमा मिसाएर पराल किन बेच्नु ? अनि त्यो मेहेनत ? पराल बेर्न लागेको श्रमको मूल्य पनि रायोको पातमा जोडिएको हुनुपर्छ । यसरी मूल्य तय गरिनु अनावश्यक हो ।
उपभोक्ता पनि कम कहाँ छन् र ! बिहान सित्तैमा लिएको ३ ढिँडी खोर्सानी सम्झें ।
केही महिनाअघि दरवारमार्गमा व्यक्तिगत काम थियो । अफिसकै एक सहकर्मीसँग बुद्धनगरबाट दरवारमार्ग गइयो, मोटरसाइकलमा । त्यो दिन सायद विप्लवको बन्द थियो । गाडी कम थिए सडकमा । फर्केर पुतलीसडक आइपुग्दा अचानक ‘मःम खाने भोक’ लाग्यो ।
कहाँ खाने ? अनामनगरको वोतामा जाउँ भन्ने भयो । पस्यौं । पैसा पहिला तिर्नुपर्ने रहेछ । खान खानुभन्दा अगाडि पैसा तिर्दा मुग्लिनमा भात खाएको याद आयो ।
कुपन बोकेर नम्बर कुर्दै बस्यौं । पानी खान मन लाग्यो । पानी माग्यौं । फेरि पहिला पैसा तिर्न भने । मिनिरल वाटर खानुपर्ने रहेछ ।
‘पानी त सित्तैमा पाइँदैन र ?’ प्रश्न गर्यौं ।
‘यहींको पानी खुवाउँदा कम्प्लेन आयो, त्यसैले मिनरल वाटर दिने गरेको,’ काउन्टरमा बस्नेले जवाफ दिए ।
पानीमा कम्प्लेन आएको हो भने त्यहीं पानीमा पिठो मुछेर बनाएको मःम खानु कम्प्लेनबिनाको होला ? अनि अचार नि ? चाउमिन, तरकारी वा अन्य खाना ? प्रश्न नआएको होइन ।
सँगैका साथीले भने, ‘पानी बेच्न यिनीहरुले यो जुक्ति निकालेका नि !’
होला । जुक्ति त निकाले जस्तो नै लाग्यो । तर, एक बोतल पानी बेच्न आफ्नो मुख्य व्यवसाय (रेष्टुरेन्ट)को गुणस्तरमा अरुले प्रश्न उठाउन मिल्ने जुक्ति किन निकालेको ?
यो प्रश्नभन्दा पनि रेष्टुरेन्टमा सित्तैमा पानी खान पल्केका हामीहरुलाई पानीको पैसा तिर्नुपर्दाको दुःख बेग्लै थियो ।
रिस पनि उठ्यो । तीनचोटि अचार थप्यौं । पानीको पैसा असुल्नु जो थियो । झट्ट याद आयो– केही दशक अघिसम्म काठमाडौंमा पुरी वा समोसा खाँदा तरकारी सित्तैमा पाइन्थ्यो रे ! अहिले पनि भात खाँदा जति चोटी पनि तरकारी थप्न पाइन्छ । हामी जस्तै ग्राहक बढ्न थालेपछि होटलवालाले मःम अचारको बेग्लै पैसा लिन बेर छैन ।
अर्काे पनि प्रसंग छ । केही दिन अगाडि डेरीमा दही किन्न गएँ । मभन्दा अगाडि एक ग्राहकले आइसक्रिम किने ।
उनले पसलेसँग १० वटा कोन (आइसक्रिम खाने भाडो) पनि मागे । म पनि दही किनेर उनकै पछिपछि फर्किएँ । मैले पछ्याएको होइन । समय त्यस्तै पर्यो । उनी र म एकैतिर जाने रहेछौं ।
अलि अगाडि आएपछि भेट भयो । पसलमा मुख हेराहेर भएको थियो । उनले पनि चिने जस्तो गरे । सँगै आउदै थियौं ।
अलि वर चोकमा आएर उनले प्लाष्टिकको झोलाबाट झिकेर कोन फालिदिए । म ट्वाँ !
सोधें, ‘किन फालेको ?
‘कसले यसमा खान्छ र, बटुकोमा खाइहालिन्छ, घरमा फोहोर बोकेर के जानु ?’ उनले जवाफ फर्काए ।
‘अनि अघि १० वटा दिनु भनेर किन मागेको ?’ भनेर सोध्न मन लागिरहेको थियो । सोधिनँ ।
उनैले भने– यो नल्याउँदा पैसा घटाउने होइन, यसको थप पैसा पर्ने पनि होइन । अनि पसलेलाई किन फाइदा दिने ? त्याँबाट ल्याउने, यता फाल्दिने ।
फेरि सम्झिएँ । सागसँग बेचिएको पराल । पराल बेच्न गरिएको मेहेनत । मःम खाँदा पानी नदिने बोता । कोन नलिँदा पैसा नघटाउने डेरीवाला । ती भलाद्मीले जे गरे, ठीक गरे ।
सम्झौं कि जस्तो लागेको पनि हो । साग किन्दा सित्तैमा लिएको ३ ढिडी खोर्सानी । पानी किनेर खानु परेको झोकमा मःम खादा ३ चोटी थपेको अचार । तर, यी दुई घटनामा म ग्राहक थिएँ । ग्राहक भनेको भगवान हो, व्यापारीका लागि ।
तर, मसँगैका यी भलाद्मीले सित्तैमा कोन ल्याएर यसरी चोकमा मिल्काउन हुन्थ्यो ? पटक्कै हँुदैनथ्यो । उनले सुविधाको दुरुपयोग गरे ।
‘यसो गर्नु हुँदैन’ भनेर उनलाई सम्झाउन मन लाग्यो । केही भन्न उनीतिर फर्कें । एउटा घरको गेट घत्रक्क खोल्दै उनले भने– ल है त ! उनको घर त्यहीं रहेछ । केही भन्नै नपाइ उनी हिडे । मनमा कुरा खेलिरह्यो । मान्छेका दुःख !
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ४, २०७६, ०५:४५:००